Uyikhuphela njani iVidiyo yeYouTube yePowerPoint? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyikhuphela njani ividiyo ye-YouTube yePowerPoint?
Kulabo basebenzisi abafuna ukunika umtsalane ngakumbi kwimiboniso yabo yePowerPoint banokuzama ukufaka iividiyo ngokuthe ngqo kwiqonga leYouTube. Ke iinkcazo-ntetho zakho aziyi kujonga njengokudikayo njengoko beqhele ukwenza. Ukuba ufuna ukufunda ukuba ungayenza njani qiniseka ukuba ufunda inqaku elilandelayo.
I-PowerPoint sesinye sezixhobo ezithandwa kakhulu ngabasebenzisi xa besenza imiboniso. Kweli qonga Sinokhetho lokufaka naluphi na uhlobo lwefayile yemultimedia, ukusuka kwimifanekiso, izandi kunye neevidiyo ezithunyelwe kuYouTube. Namhlanje sikubonisa eyona ndlela ilula yokukufeza.
Iindlela zokufaka ividiyo ye-YouTube kwiPowerPoint
Iindaba ezimnandi zezokuba zininzi iindlela zokufaka ividiyo ye-YouTube kwisiboniso sePowerPoint.. Eyona ndlela ilula yokwenza oko kukucofa kwindawo ethi "faka" iqhosha kunye nokufikelela kwi "ividiyo ekwi-intanethi".
Ukusuka apho unako Khangela ividiyo ngokuthe ngqo kwiqonga le-Youtube kwaye uyifake kumboniso wakho wePowerPoint. Unenketho yokukopa ikhonkco yevidiyo kwi-YouTube kwaye uyincamathisele kwitemplate yePowerPoint. Nantsi indlela onokuyiphumeza ngayo:
Iindawo ividiyo ofuna ukuyifaka kwi-PowerPoint kwaye ukope ikhonkco kwibhar yedilesi.
Apr PowerPoint kunye Khetha isilayidi apho ufuna ukubeka ividiyo ye-Youtube.
Cofa kwindawo okhetha kuyo "faka"Kwaye ucofe" kwiVidiyo "
Ngoku kufuneka ukhethe ukhetho "Ividiyo ekwi-Intanethi"
Incoko yevidiyo ekwi-Intanethi iya kuvulwa. Apho kuya kufuneka uyenzile Cola i-url ukhuphele kwi-YouTube.
Cofa ku "Faka"kwaye ilungile.
Khuphela ividiyo ye-Youtube
Abasebenzisi banokuzikhuphelela ividiyo ngqo kwiqonga leYouTube kwaye emva koko uyifake kuso nasiphi na isilayidi sePowerPoint. Ukwenza njalo, kufuneka bafikelele kwi-YouTube, bakhethe ividiyo abafuna ukuyikhuphela, bakope ikhonkco kwaye bayincamathisele kwelinye lala maphepha okhuphelo.
Xa ukhuphela ividiyo kufuneka uyazi kakuhle ifomathi. Khumbula ukuba kufuneka ibe Ifomathi yefayile ehambelanayo kwi-PowerPoint yakho, njenge-AVI, MPG okanye iWMV.
Emva kokukhetha ifomathi yokukhuphela, ekuphela kwento eseleyo kukucofa kwiqhosha "khuphela”Kwaye ukhethe ifolda apho sifuna ukuba ifayile ikhutshelwe.
Faka ividiyo ekhutshelweyo
Siligqibile isigaba sokuqala senkqubo ngempumelelo. Emva kokuba ividiyo ye-YouTube ikhutshelwe kwikhompyuter yethu Inyathelo elilandelayo liya kuba kukuyifaka kwisilayidi sePowerPoint.
Vula iPowerPoint kwaye ukhethe isilayidi apho ufuna ukufaka ividiyo. Ngoku cofa ukhetho "Faka"Kwaye emva koko ucofe" kwiiMovie nakwiZandi. Imenyu entsha yokuhla izakuvela ngokuzenzekelayo.
Cofa ku "movie kwifayile”Kwaye ukhangele ifolda apho ukhuphele ividiyo ye-YouTube. Emva koko kufuneka ucofe u- "Kulungile" ukufaka ividiyo kwisilayidi.
Kuya kufuneka khetha ukuba ufuna ividiyo idlale ngokuzenzekelayo okanye ukuba ufuna ukudlala ifayile xa uyicofa. Okokugqibela lungisa ubungakanani befayile yemovie kwisilayidi sakho nakwi-voila
1 Iindlela zokufaka ividiyo ye-YouTube kwiPowerPoint
2 Khuphela ividiyo ye-Youtube
3 Faka ividiyo ekhutshelweyo